Ilaa iyo intii uu dagaalka Afghanistan bilaabmay bishii October su�aasha ay iswaydiinayaan in badan oo ah dadka faaleeya siyaasada aduunku waxa ay ahayd meesha uu Maraykanku duqayn doono Afgaanistaan ka dib. Jawaabta su�aashan waxa ka jawaabi kara oo kaliya dadka uu gacanta ugu jiro qaraarka wadanka Maraykanku iyo xulafadiisa u dhawdhaw.
Is Somalia Next Target for U.S.?
BRUSSELS, Belgium (AP) -- A senior German official said Wednesday that the United States had marked war-ravaged Somalia as the next target in its global fight against Osama bin Laden's terrorist network, but Defense Secretary Donald Rumsfeld said the report was ``flat wrong.''
``The German was wrong. He didn't mean to be, and he's probably sorry, but he was flat wrong,'' Rumsfeld said.
More... | Dec 19, 2001
Sidaas oo ay tahay hadana waxa jirta warar soo duulduulaya oo ka imanaya xagga Maraykanka iyo xulafadiisa kuwaas oo sheegaya in ay jiraan wadamo dhawr ah oo laga yaabo in ay noqan karaan kuwa uu Marykanku ku sii jeedin doono xoogiisa marka uu ka soo dhamaado Afghanistan. Wadamadaas dhawrka ah waxa ka mida Soomaaliya. Maalmahan danbena waxa sii xoogaysanaysa wararka sheegaya in Soomaaliya ay noqonkarto ta ku xigi doonta Afgaanistaan. Dooda socota waxa aad moodaa in ay ka taagantahay (sida uu u sheegay Reuter nin ka tirsan dawlada Jarmalka oo arkay qorshaha Marykanka) qaabkii looga hawl gali lahaa Soomaaliya ee ma aha ma laga hawlgalayaa Soomaaliya.
Ma rabo markaa in aan saadaaliyo in Soomaaliya duulimaad lagu qaadi doono iyo goorta lagu qaadi doono, taas waqtiga ayaan u dhaafi laakiin su�aalaha aan doonayo in aan ku faaleeyo maqaalkani waxa weeye laba su�aalood. Ta koowaad Soomaaliya ma tahay wadan � argagixiso� degentahay oo khatar ku ah amaanka aduunka oo mudan in lagu duulo. Ta labaadna waxa weeye, yaa u sabab ah in Soomaaliya noqoto mid maanta meelo badan oo aduunka ah looga arko hoy �argagixiso� iyo in ay khatar ku tahay amaanka aduunka. Su�aasha hore waxaan kaga jawaabi qaybta kowaad ee maqaalkan ta danbena hadii Alle idmo waxaan ku eegi qaybta labaad ee faaladan.
Soomaaliya Ma tahay Hoy argagixiso
Wadama reer Galbeedka ah qaarkood oo uu u horeeyo Marykanku, qaar ka mida wadamada jiraanka la ah Soomaaliya sida Itobiya iyo waliba qaar ka mida siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa aaminsan in Soomaaliya ay tahay wadan hoy u ah (ama u noqon karata) qaar ka mida ururada �argagixisada� caalmku raadinayo. Ma garanayo daliilaha qarsoon ee ay hayaan qolooyinkani laakiin daliilaha muuqda ee ay ku andacooyin waxaa lagu soo koobi karaa:
1. Soomaaliya waa wadan aan lahayn nidaam xoog leh oo ilaalin kara xuduudaka iyo xeebaha dhaadheer ee Somaaliya. Tani waxa ay fursad siinaysaa( ayay aaminsanyihiin) in argagixisada caalamiga ahi ay wadan sidan oo kale ah hoy ka dhigtaan, sababta oo ah cid ogi ma jirto waxa ka dhex socda wadankan oo kale. Duruufta noocan ah ee Soomaaliya ku suganthay ayaa keentay in ay ka samaysmaan Soomaaliya (sida ay ku andacoonayaan) xerooyin lagu tababaro �argagaxisada".
2. Waxa ay aaminsanyihiin in ururka Al-Itixaad uu yahay urur is bahaysi la leh ururka Al-qaacida oo ah ururka uu Maraykanku ku tuhunsanyahay qaraxii ka dhacay wadanka Marykanaka. Waxa ay ku andacoonayaan in Al-itixaad uu magan galiyo amaba magan galin karo mustaqbalka madaxda ururadan la baadi goobayo.
3. Usaama bin Laadin oo sheegtay in ururkiisa Al-Qaacida tababaray kooxohii la dagaalamay Marykanka 1993, sidaas oo kale waxa uu sheegtay in qaar kamida, kuwii dagaalkaa ka qaybqaatay ay ahaayeen xubno ka tirsan ururkiisa Al-qaacida. Tani waxa ay daliil u tahay ayay leeyihiin in Al-Qaacida uu Soomaaliya fadhiisimo ku leeyahay.
4. In hujuumkii lagu qaaday safaaradaha Marykanka ee Nairobi iyo Tansania la tuhunsanyahay in laga soo abaabulay Soomaaliya
Kuwaas weeye daliilaha ugu xooga badan ee ay cuskanayaan qolooyinkani . U malayn maayo si kasta oo ay Soomaalidu uga doodaan arimahaa kor ku sugan ama ay isugu dayaan in ay qanciyaan aduunka in uu Marykanku dhagaysanayo, waa hadii uu isku qanciyo in Soomaaliya ay khatar ku tahay nabadiisa iyo ta caalamkaba amaba uu ujeedooyin kale oo qarsoon ka leeyahay Soomaaliya. Sidaas oo ay tahay hadana waxa aan isku dayi in aan wax ka idhaahdo nuqdooyinkaa afarta ah ee in badan oo wargaysyada caalmku iyo siyaasiyiin badani ay ku soo celcelinayaan.
Nidaam Dhaxe oo xoog leh ma jiro Soomaaliya:
Waa run in aan Soomaaliya aanu ka jirin nidaam xoog leh oo ka war haya wadanka oo dhan. Taas oo jirta hadana waxa la og yahay in ay mandaqad kasta oo wadanka ah uu ka jiro nidaam ay isku waafaqeen dadka ku nool mandaqadaasi. Tani waxa ay fududaynayasaa in la ogaado waxa ka socda mandaqad kasta oo wadanka ka mida. Hadii ay jiraan markaa meelo ay ka furanyihiin xerooyin lagu tababaro �argagixiso� waxaan shaki lahayn in ay u muuqan lahaayeen xerooyinkaasi dadyowga deggan degaanadaa. Ilaa iminkana in kasta oo la sheegsheegay in ay jiraan xerooyin lagu tababaro �argagixiso�ma jiro daliil qudha oo la soo bandhigay oo cadaynaysa arintaa. Taa waxaa ka soo horjeeda, in dad badan oo ah dadka u kuurgala siyaasada Soomaaliya qaarkoodna ayba ka shaqeyeen wadanka ay ka marag kaceen in wax xerooyin ah oo �argagixiso� lagu tababaraa aanay wadanka ka jirin. Waxa ka mida dadkaa ergaygii u qaabilsanaa qaramada midoobay arimaha Soomaaliya, ergayga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, xoghayaha guud ee qaramada midoobay, suxufiyiin iyo dad badan oo akadamiyiin ah.
Al-itixaad iyo Siyaasada Soomaaliya:
Afrika, Islaamka iyo argagixisada
Washington, DC - Kulan dheer oo lagagahadlay "Afrika, Islaamka iyo argagixisada" ayaa siweyn loogu falanqeeyey Soomaaliya, taas oo Khubaro Maraykan ah ay Kadigey in Lagudegdego Soomaaliya KA.AKHRI.HALKAN
Itixaadku waa urur ka mid ahaa ururada Islaamiga ah ee Soomaaliya. Shaki ma laha in marar ka mida 10 kii sanno ee tagay in uu isku dayay in uu xoog ku qabsado meelo ka mida wadanaka soomaaliyeed taas oo aad odhan karto waxa uu kala mid ahaa aragtidayda ururadii badanaa ee ku tartamayay ka talinta wadanka. Natiijooyinkaa ka dhashay dagaaladaa uu galay itixaadku waxa ay keentay in uu dib dhac ku yimaado dhismihii ururkaas. Runtuna waxa ay tahay in maanta Soomaaliya aanu ka jirin urur xoog leh oo hubaysan oo la yidhaa Al-itixaad. Hadii ay jirto iyo meesha ay ka jirto waa in la cadeeyaa inta aanay dhicin in la duqeeyo dad masaakiin ah oo aan wax danbi gaysan. Midda kale ma la is barbarbardhigi karo Talibaanka Afgaanistaan iyo Itixaadka Soomaaliya. Talibaanku waxa ay ahaayeen nidaam u taliya shacbi iyo wadan dhan, laakiin itixaadku waxaan odhan karnaa waa urur aanay jirin buqcad Soomaaliya ah oo uu saydaro ku leeyahay amaba uu ka taliyo. Hadii markaa la rabo in duulimaad lagu qaado Itixaadka su�aashu waxa weeye waa halkee halka uu ka taliyaa si taliskaa looga burburiyo. Su�aal weeye aanay wali cadayn jawaabteedu. Mida kale goorma ayay noqotay sharci in wadan loogu duulo sababtoo ah waxa ku nool urur aan anigu u arko �argagixiso� iyada oo aanan wax daliil ah soo bandhigin. Waxa aad moodaa in ay tani tahay munaafiqnimada siyaasada maanta aduunka ka jirta.
Dagaalkii 93 Iyo Al-qaacida:
Qof kasta oo Soomaaliya waa uu ogaa in dagaalkaasi uu ahaa mid dhexmray Jeneraal Caydiid iyo ciidamadii Marykanka ee markaa doonayay in ay soo qabtaan jeneraalka. Xuseen caydiid ayay ahayd inta uu ku celcelinayo Al-qaacida ayaa joogta Soomaaliya in uu bal xaqiiqadan cadeeyo oo uu sheego in Jeneraalka iyo Al-qaacida uu xidhiidh ka dhexeeyay iyo in kale.!!! Aragtidayda dagaalkaasi ma ahayn mid uu ku danbeeyay Bani-laadin iyo kooxdiisu sababtoo ah xaqiiqooyinku sidaa ma sheegayaan. Bani laadina ma hayn in uu sheegto falal aanu samayn.
Hujuunkii Safaaradaha Maraykanka :
>>Kenyan President Urges Somali Warring Factions
>>Rumsfeld denies a German official's claim
>> Somali warlords find new path to power
>> Is Somalia Next Target for U.S.?
>> Foreigners Held in Somalia
>> U.S. Official in Somali Capital, Meets Government
>> Bringing order to Somalia, slowly ..MSNBC
>> Somali warlords see U.S. campaign as path to power
>>Somali gov, opposition begin talks ..CNN
>> Somali talks begin in Nairobi ..BBC
>> Somali-run grocery to reopen ..Seattle
>> More Latest Somalia related News ..Click
>> Monitoring Somalia ...click here
Tana wuxuun baan ka odhan ilaa iminka ma jirto daliil qudha oo sheegaysa in dhacdooyinkaa laga soo abaabulay dhulka Soomaaliyeed. Waxa kale oo jirta in dhamaan dadka lagu tuhunsan yahay in ay soo abaabuleen ama ay fuliyeen hujunkaa aanu ku jirin qof qudha oo Soomaaliyi. Markaa hadii ay Cadaalada Marykanku aanay ku tuhmin shakhsi qudha oo Soomaaliya inuu ka qaybqaatay dhacdooyinkaa, sidee loogu andacoon karaa in falalkaa laga soo abaabulay Soomaaliya.
Gabagabadii ma lihi Soomaaliya ma joogo qof �argagixiso� ahi. Waa ay joogi karaan sida ay u joogaan wadan kasta oo ah wadamada caalamka ahba. Laakiin sabab uma noqon karto duulimaad iyo faragalin lagu sameeyo shacbigaa. Hadii ay taasi sabab tahayna waxa jira wadama badan oo ay tahay in ay Soomaaliya ka horeeyaan .
Su�aashu hadaba waxa ay tahay ma jiraan asbaabo kale, yaase ka masuula in tuhunka loo soo jeediyo Soomaalida. Qaybta labaad ee maqaalkan ayaan hadii Alle yidhaa ku faalayn.